Ny fiakarana sy ny fisondrotan'ny bilaogin'ny mpitsidika - Fantaro ny fomba anampiany anao ... | Fifamoivoizana hiara-miasa
Ny fiakaran'ny vidin'ny vahiny fitorahana bilaogy - Fantaro ny fomba anampiany anao mikendry fifamoivoizana
Tsy isalasalana fa asa-tanana ny fanoratana. Ara-dalàna izany ary amin'ny fotoana tena izy tena sarobidy manokana rehefa mihazakazaka amin'ny Internet ianao toy ny serivisinao. Faharoa, azonao atao ny manoratra bilaogy vahiny ho an'ny fifamoivoizana an-tranonkala kendrena bebe kokoa.
09/24/2021 06:45 hariva GMT
Rehefa mankamin'ny Internet ianao dia tsy mijery fotsiny ireo sary mihetsika na sary ao anatiny. Io no mampahafantatra ny fivezivezena amin'ny tranonkala amin'ny tranokala. Raha fintinina, ny tranonkala internet dia tsy nahagaga mihitsy.
Ny Perks an'ny Blogging Blogging
Ankoatry ny famatsiam-bola mendrika hijerena ireo fitaovana amin'ny tranonkalanao manokana dia azonao atao ihany koa ny mikendry bebe kokoa tranonkala fifamoivoizana amin'ny alàlan'ny fomba fanoratana bilaogy mpitsidika. Mahazo ireo rohy amin'ny Internet amin'ireo tranonkala hafa maro karazana ianao nefa tsy mila manambola na inona na inona.
Fahazarana vitsivitsy resahina
Eny, izany dia mety hiseho mahaliana ary tena tsara tokoa. Moa ve tsy misy teboka na olana hafa tokony horesahina?
Noho ny fanoratanao bilaogy vahiny izay manondro ny fampidiranao ireo singa ao amin'ny tambajotra sosialy isan-karazany ary koa mba hahitan'ny tsirairay ny tsikera sy ny fahitana, dia mila mahazo antoka ianao fa mijanona amin'ny endrika tsara indrindra anao rehefa mamorona. Fa maninona Noho ny zava-misy fa tsy maintsy miomana fotsiny ianao ary aorian'izay mandefa ny tena miavaka amin'ireo rafitrao dia!
Io no fampitaovana ara-barotra anao ary koa ny fanomezana ireo mpampiantrano Internet izay tsy manam-potoana hamoronana hahazoana ny vahaolana. Noho izany dia tokony hisarika azy ireo ianao ary hampahafantatra azy ireo izay anananao. Ny lohahevitrareo dia mila mahavariana ary misy karazany hafa koa.
Mety misy ny fanamarihana tafahoatra napetraka amin'ny lohahevitrao koa aleo miandry izany. Mety misy mpanoratra bilaogy hafa isan-karazany manao ny tsy fanao aminao amin'ny alàlan'ny fanovana kely ny hafatrao, ny fanesorana ireo rohy amin'ny tranokalano, ary avy eo ampakaranao azy ireo amin'ny loharano hafa. Manome soso-kevitra ny tranokalanao fa kely kokoa ny fivezivezena amin'ny tranokala.
Azo antoka ny sasany hilaza fa ny fanoratana bilaogy mpitsidika no foto-kevitra tsara indrindra momba ny firafitry ny rohy web. Azo antoka fa handà izany sosokevitra izany ny sasany. Ka raha hazava tsara dia mila kasaina hatao ny lesoka nefa afaka manao izay tianao foana ianao hahazoana tombony amin'ity asa ity.
Ny tanjonao voalohany eto dia ny mikendry ny fivezivezena amin'ny tranonkala. Ny zava-dehibe dia hampiasa ny fahaizanao mamorona fitaovana ianao ary mampakatra azy ireo amin'ny karazana rehetra haino aman-jery sosialy manao rohy miverina.
Ny asa soratra dia tsy isalasalana fa asa-tanana. Faharoa, azonao atao ny manoratra bilaogy vahiny ho an'ny fifamoivoizana an-tranonkala kendrena bebe kokoa. Io no mampahafantatra ny fivezivezena amin'ny tranonkala amin'ny tranokala. Ankoatry ny fanomezana mendrika hijerena ireo fitaovana ao amin'ny tranokalanao manokana dia azonao atao koa ny mikendry ny fifamoivoizana an-tranonkala bebe kokoa amin'ny alàlan'ny fanoratana bilaogy mpitsidika. Midika izany fa kely kokoa ny fivezivezena amin'ny tranokalanao.